Nharireyomurindi—Yokudzidza, September 15, 2014
Magazini ino ine nyaya dzichadzidzwa kubva musi wa27 October kusvika 30 November, 2014.
Inzira ipi yakanaka yokutsvaka kuva mutariri?
Nyaya ino ichakurukura zvimwe zvikonzero zvinoita kuti vakawanda vabvume kuti chitendero cheZvapupu zvaJehovha ndechechokwadi. Tichakurukurawo zvikonzero zvinoita kuti Zvapupu zvinyatsodavira kuti chitendero chazvo ndechechokwadi.
Munhu wose anosangana nematambudziko nokuti tiri kurarama munyika yaSatani. Ndeipi mimwe miedzo inoshandiswa naSatani? Tingaigadzirira sei?
Vabereki vane basa rokurera vana vavo “mukuranga nokutungamirira pfungwa kunoitwa naJehovha.” (VaEfeso 6:4) Nyaya ino inokurukura zvinhu zvitatu zvingaitwa nevabereki pakurera vana vavo uye kuti vavabatsire kuda Jehovha.
Zvinotaurwa neBhaibheri pana Pisarema 37:25 uye pana Mateu 6:33 zvinoreva here kuti Jehovha haazomboregi muKristu achishaya zvokudya?
Rufu nezvose zvinorukonzera zvinoita kuti vanhu vatambure zvakanyanya. Nei vanhu vachifa? ‘Muvengi wokupedzisira, rufu, achaparadzwa’ sei? (1 VaKorinde 15:26) Ona kuti mhinduro dzacho dzinoratidza sei kuti Jehovha anotonga zvakarurama, ane uchenjeri uye ane rudo.
Vashumiri vaJehovha vakawanda vanoshanda nesimba mubasa renguva yakazara. Tingaitei kuti tifunge ‘basa ravo rinobva pakutenda’ uye ‘basa ravo rorudo’?—1 VaTesaronika 1:3.